Mifungo Yakawanda Yakashata - Chii? | Bezzia
Susana godoy | 21/11/2021 18:00 | Psychology
Pfungwa dzisina kunaka dzinogona kungoerekana dzaitika muhupenyu hwedu asi nekuda kweizvi vanogona kukonzera kusagadzikana kukuru, kunyanya mupfungwa. Vachapesvedzera nenzira isina kunaka, sezvavari ivo pachavo, saka zviri nyore kuvarwisa nekukurumidza sezvinobvira.
Nokuti Kana tikasazvigadzirisa, kufunganya kana kutoora mwoyo kunogona kuva rutivi rwoupenyu hwedu. Sezvo nekusakwanisa kudzidzora, pfungwa dzisina kunaka dzinokwezva dzimwe pfungwa dzakawanda dzemhando imwe chete. Kana iri nyaya yako, usazvinetse nekuti unogona kumira pamberi pavo.
1 Ndedzipi pfungwa dzisina kunaka dzinonyanya kuitika
1.1 Rongedzera mamiriro acho ezvinhu
1.2 Gara uchifunga nezvekunyanyisa
1.3 Gara uchiona 'nhamo'
1.4 Maonero ehutsinye pamusoro pako
1.5 Tend to generalize
1.6 Kukupa mhosva pane zvese
2 Nzira yekudzora uye kudzivisa pfungwa dzisina kunaka
Ndedzipi pfungwa dzisina kunaka dzinonyanya kuitika
Rongedzera mamiriro acho ezvinhu
Kana chimwe chinhu chakaipa chikaitika kwatiri, tinongosvika pakuipisisa. Kureva kuti kubva kune zvakaipa isu tichiri kuita kuti uropi hwedu huzive kuti hunogona kuve hwakaipisisa. Saka, isu tiri mune inenge yakafa-yekupedzisira loop. Hatifanire kuita zvemitambo zvakanyanya, kunyangwe zvakaoma uye hongu ona zvakanaka panguva yega yega mamiriro ese, nokuti chokwadi pachava nechimwe chinhu chakanaka mairi.
Gara uchifunga nezvekunyanyisa
Kunyanyisa kunogara kuchinzi kwakaipa. Nokuti, tinofanira kuwana kuenzanisa pakati pezviviri. Zvakafanana nekutaura dema kana chena, kwete, nekuti kune grey chiyero chinotifarirawo zvakanyanya. Pachava nechiyero mukusazvibvumira kutakurwa nechinhu chiri chose chakashata uye kutsvaka kuti mwaranzi muduku iwoyo wechiedza chezuva.
Gara uchiona 'nhamo'
A bit linked to dramatization, asi ndezvekuti dzimwe nguva kana zvese zvatipfuura tinoona remangwana senhamo uyewo nezviripo, zvese zvinoiswa pamberi pedu. Nokudaro, tinotanga kufunga kuti hazvizobudiriri kana kuti zvatinoita hazvina musoro. Zvakapesana zvikuru! Kana zvisati zvaitika, sei uchitifungira? Ndiyo imwe yemafungiro asina kunaka achatikanganisa zvakanyanya.
Maonero ehutsinye pamusoro pako
Pfungwa dzisina kunaka dzinobatanidzwawo nekuva nemafungiro asina kunaka pamusoro pako. Zvinoita sekuti tinoda kurwisana isu uye kwete, tinofanira kurwisana nemafungiro iwayo asi tichipa zvakanakisisa zvedu nokuti mumwe nomumwe wedu akasiyana.
Tend to generalize
Sezvo chimwe chinhu chinoitika kwatiri nguva dzose, isu kazhinji generalize as if it will happen to us as usual. Asi kwete, kana chimwe chinhu chikaitika kwatiri hazvifaniri kudzokororwa uye kana zviri musimba redu, zviri nani zvikuru nokuti tichaita zvose zvatinogona kuti zvisaitike. Ikoko tichafanira kurwisa pfungwa dzakaipa nesimba redu rose.
Kukupa mhosva pane zvese
Kunyangwe dzimwe nguva isu tine mhosva yechimwe chinhu kunyanya, hatifaniri kuzvipa mhosva pazvinhu zvose. Asi ichokwadi kuti sekufunga kwakashata ndeimwe yeakajairika. Hatizvivimbi nekudaro tinofunga kuti zvese zvakaipa zvakatikomberedza.
Nzira yekudzora uye kudzivisa pfungwa dzisina kunaka
Chokwadi ndechekuti hachisi chinhu chiri nyore kunzvenga asi tinogona kuzvidzora. Kunyangwe zvikatidhura zvishoma, zvichave zvakakosha. Zvinogara zvichinzi apo pfungwa idzi dzinouya mupfungwa dzedu, zvakanaka kuti tidzinyore pasi. Nokuti zvichida kana vachipfuura nepamusoro pemusoro wedu vanogona kuonekwa zvakanyanya kuipa uye kana vakanyorwa uye vakaongororwa havazove zvakanyanya.
Kune rimwe divi, tinofanira kudzidzidza zvishoma, ongorora kana dzakaipa chaizvo kana kuti dzine mhinduro. Nokuti kana vakadaro, hatifaniri kunyanya kunetseka. Mukuwedzera, zvinofanira kutaurwa kuti vazhinjisa vachadaro. Kugona kudzidzura, ndiko kudzitenderedza. Edza kutsvaga zvakanaka, mhinduro uye positivity. Kuchinja maonero nderimwe remazano akanakisa atinogona kushandisa. Kana idzi mhando dzepfungwa dzichidzokororwa, imhaka yekuti pane chimwe chinhu kumashure kwavo, saka inguva yekubheja pakutsvaga mhinduro uye pamwe inyanzvi ine izwi rekupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Psychology » Ndedzipi pfungwa dzisina kunaka dzinowanzogara dzichiitika?
Manicure mazano ezvipikiri zvipfupi